I-TREND e-Afrika kwinkqubo yokusebenzisana kwi-Intanethi- AfricArXiv
Iqela I-TReND e-Afrika idale uthungelwano lweengcali olunokunceda oososayensi baseAfrika ukuba baphuhlise iiprojekthi zabo ezinqwenelekayo ngokusebenzisana kwi-Intanethi, ngokudlulisa izithintelo zokuhamba ezibangelwa ngubhubhane wangoku.
Uncedo olufumanekayo lunokuvela kwiiprojekthi ezincinci zexeshana elifutshane ukuya kuvavanyo olukhulu olwandayo ngaphezulu kweenyanga okanye nakwiminyaka kwaye lunokukhokelela ekusebenzisaneni okuhlala ixesha elide ngaphaya kwemeko yangoku yehlabathi ngokutyelelwa kwindawo kunye nokutshintshiselana kwabantu.
Ngolwazi oluthe kratya kunye neenkcukacha zokukhuphela I-TREND e-Afrika Isikhokelo sokuBambisana kwi-Intanethi (PDF).
Ngokujoyina inkqubo yethu entsha, iprojekthi yakho iya kubhangqwa nengcali ekulungeleyo ukuqala ukusebenzisana nawe! Fumana uncedo olongezelelekileyo kwaye uphucule uthungelwano lwakho nososayensi abavela kwihlabathi liphela. Ungachithi xesha, Joyina ngoku!https://t.co/PwK6uS0rjd pic.twitter.com/LQQl94Zqlp
-INTETHO e-Afrika (@TReNDinAfrica) Februwari 19, 2021
Iingcali zalo naliphi na icandelo lesayensi zamkelekile, ukusuka kubafundi be-PhD ukuya koonjingalwazi, abaziva ngathi bafuna ukwenza utshintsho kwaye bancede abanye ukuba bazalisekise amaphupha abo esayensi.
Nje ukuba sifumane isicelo sakho, uya kuba nokufikelela kwindawo yogcino lwedatha yeprojekthi ukuze ufumane iprojekthi ehambelana nezakhono zakho kunye nexesha elikhoyo.
Amaqela ubuncinci abantu abathathu abanemibuzo encinci kunye namathandabuzo, okanye iiprojekthi ezinkulu ezifuna inkxaso ehlala ihleli zinokufaka isicelo sokuba liqabane laseAfrika kwinkqubo yokusebenzisana kwi-Intanethi.
Nje ukuba siyifumene iprojekthi yakho, iya kongezwa kwindawo yogcino lwedatha yeprojekthi kwaye yenziwe ifikeleleke kuzo zonke iingcali ukufumana oyena mphengululi ofanelekileyo wokukunceda ngeprojekthi yakho.
Bhalisa iprojekthi yakho
Funda konke malunga nenkqubo yentsebenziswano ye-TREND e trend Trendia.org/collaborations
Malunga ne-TREND e-Afrika
Ukuxhasa iNzululwazi eAfrika. Kwi-TREND, siyakholelwa kwixabiso lezinto ezintsha zesayensi kwinkqubela phambili kwezoqoqosho nakwintlalo. Siluxhasa uphando lwebhayomedical eAfrika ngokunika abaphandi baseAfrika izixhobo kunye nobuchule bokuqhubela phambili iinjongo zabo zophando.
Ekuqaleni yayisekwe kwiYunivesithi yaseCambridge, siyinhlangano engenzi nzuzo eqhutywa ikakhulu yinethiwekhi enkulu yamavolontiya ososayensi kwiiyunivesithi eziphambili kwihlabathi liphela. Sinomdla wokuxhotyiswa kwezesayensi kunye nokuyila. | bhekisa.org